के तपाईले पनि आफ्नो पासवर्ड १२३४५६ राख्नुभएको छ ? ह्याकरबाट यसरी बच्नुहोस् - Himalaya Post
के तपाईले पनि आफ्नो पासवर्ड १२३४५६ राख्नुभएको छ ? ह्याकरबाट यसरी बच्नुहोस्
Posted by Himalaya Post | २५ बैशाख २०७६, बुधबार १३:२९ |
एक अध्ययनमा पाइएको छ कि विश्वका लाखौँ मानिस आफ्ना संवेदनशील खाताका लागि सजिलै सम्झिन सकिने खालका पासवर्ड राख्ने गर्छन् । बेलायतको नेशनल साइबर सिक्युरिटी सेन्टर (एनसीएससी)ले ह्याक भएका अधिकांश खाताका पासवर्ड १२३४५६ राखिएको पत्ता लगाएको छ ।
यस अध्ययनले साइबर ज्ञानको कमीलाई अघि सारेको छ, जसबाट खतरा पैदा हुनसक्छ । एनसीएससीले भनेको छ, ‘बलियो पासवर्ड राख्नका लागि मानिसलाई सजिलै सम्झिन सकिने तीन अक्षरलाई जोडेर प्रयोग गर्नुपर्छ ।’
आफ्नो पहिलो साइबर सर्वेमा एनसीएससीले भनेको छ कि ह्याक गरिएका खाताको व्यापक विश्लेषण गरिएको थियो । जसमा विशेषगरी कुन शब्द, वाक्य वा अंक प्रयोग गरिएको छ भन्ने खोजिएको थियो ।
जसबाट १२३४५६ पासवर्ड राख्नेको संख्या सर्वाधिक रहेको पाइएको थियो । लगभग २ करोड ३० लाखभन्दा पनि बढीयो यो पासवर्ड प्रयोग गरेका थिए ।
यस्तै दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय पासवर्ड १२३४५६७८९ थियो । यस्तै शीर्ष पाँचमा ‘qwerty’, ‘password’ र ‘1111111’ पनि आउँछन् ।
यस्तै पासवर्डमा सब अस्ले, माइकल, डेनियल, जेसिका र चार्ली जस्ता नाम अत्याधिक प्रयोग गरिएका थिए । प्रिमियर लीग फुटबल टिमको नाममा पासवर्ड राख्नेहरुको कुरा गर्दा लिभरपूलको नाम सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएको पाइयो । चेल्सी दोस्रो नम्बरमा थियो ।
संगीतसंग सम्बन्धित पासवर्डको कुरा गर्दा ‘ब्लिंक–१८२’ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । एनसीएससीका टेक्निकल डायरेक्टर डा. इयान लेवीका अनुसार जो सैभन्दा कमजोर पासवर्ड प्रयोग गर्छन्, उनीहरु ह्याकरको लागि सजिलै निशानामा पर्छन् ।
उनी बताउँछन्, ‘कसैले पनि आफ्नो डाटालाई सुरक्षित राख्नका लागि सजिलो पासवर्ड राख्नु हुँदैन । जस्तैः आफ्ै नामको पहिलो शब्द, स्थानीय खेलकुद टिम वा संगीत ब्याण्डबाट राखिएका पासवर्ड सुरक्षित मानिँदैनन् ।’
यस सर्वेमा एनसीएससीले सुरक्षाका लागि मानिसप्रति प्रश्न उठाएको छ । ह्याक गरिएका खाताको रेखदेख गर्ने सुरक्षा विशेषज्ञको सुझाव छ कि अनलाइन सिक्युरिटीको एक मात्र उपाय भनेको बलियो पासवर्ड राख्नु हो । त्यसैले आफ्नो पासवर्डलाई पनि बलियो बनाउनुहोस् ।
Previousकांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु, यस्ता छन् कार्ययोजना
Next४३३ स्थानीय तहले बुझाए रिक्त विवरण, यसै आर्थिक वर्षमा पदपूर्ति
आमाको उपचार गर्न आएकी महिलालाई बलात्कार गर्ने नक्कली डाक्टर पक्राउ
१५ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:१६
विकास बैंकहरुमा अब्बल गरिमा सेयर किन्दा फाइदै फाइदा
२७ आश्विन २०७६, सोमबार २०:००
चार वर्षको काम : देखिएन परिणाम
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १७:१४